အတတ်ပညာ China Rib Circular Knitting Machine နှင့် စက်ရုံ |Morton စက်ယန္တရား
သင်၏တိကျသောအထည်လိုအပ်ချက်အတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Rib Circular Knitting Machine ကို သင်ရှာလိုပါသလား။
မင်းရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်တဲ့ Higher Precision Rib Circular Knitting Machine ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
1.Rib Circular Knitting Machine သည် အပူပျံ့ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် cam box ၏ တွန်းအားပုံပျက်ခြင်းကို လျှော့ချရန်အတွက် စက်၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းတွင် လေယာဉ်အလူမီနီယမ်အလွိုင်းကို အသုံးပြုခြင်း။
2.Rib မြို့ပတ်ချည်ထိုးစက် မြင့်မားသောတိကျသော Archimedes ချိန်ညှိမှုကိုအသုံးပြုခြင်း။
3. ၎င်းကို ကြော့ရှင်းသောအသွင်အပြင်၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပြီး လက်တွေ့ကျသောဖွဲ့စည်းပုံအဖြစ် အသားပေးထားသည်။
4. တူညီသောစက်မှုလုပ်ငန်းအဆင့်မြင့်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြု၍ အစိတ်အပိုင်းများလည်ပတ်မှုနှင့်အထည်လိုအပ်ချက်များကိုသေချာစေရန်အတွက်တင်သွင်းလာသော CNC စက်များကိုအသုံးပြုခြင်း။
5. ဂီယာ၏ ပွန်းပဲ့မှုနှင့် ဆူညံသံများကို လျှော့ချရန်အတွက် ဆီစိမ်ထားသော ဂီယာများသည် ဆီစိမ်ထားသော ဒီဇိုင်းကို ခံယူကာ ၎င်းတို့၏ တိကျမှုနှင့် သက်တမ်းကို တိုးတက်စေသည်။
6. စက်၏ဒီဇိုင်းဘောင်အသစ်ကိုအသုံးပြုခြင်း၊ dial cam box base နှင့် sleeve သည် တပြိုင်နက်တည်း နေရာချထားခြင်းဖြစ်ပြီး ထိပ်နှင့်အောက်ခြေကြားတွင် အပ်နှင့်အောက်ခြေကြားရှိ ကင်းရှင်းမှုတို့ကို ချိန်ညှိရန် ပိုမိုတိကျပြီး ပိုမိုရိုးရှင်းပါသည်။
ချည်မျှင်ရက်ကန်း၊ လေအလွှာ၊ အလွှာကူရှင်၊ ရေမြှုပ်ပုံ၊ နှစ်ထပ်မျက်နှာပြင်ကွက်၊ mercerized ဝါဂွမ်းစသည်ဖြင့် ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် အရည်အသွေးမြင့် အထည်အလိပ်များကို ရိုးရှင်းသော အပ်နှင့် ကင်မရာကို ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်။၎င်းကို ruethane elastic fiber OP ကိရိယာဖြင့်အသုံးပြုပါက၊ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအတွက် ခေတ်ဆန်သော Elastic double knitting အထည်ကဲ့သို့သော ထိပ်တန်းမျက်နှာအထည်များကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ယခင်- Double Jersey Interlock ချည်ထိုးစက်
နောက်တစ်ခု: ဘက်စုံသုံး High Pile Knitting စက်
High Pile Circular Knitting စက်